Ndị ọkà okwu maara ihe akwu Audio na akwu Mini (nke a na-akpọbu Google Home na Google Home Mini) emeriela ọtụtụ ndị ọrụ n'ihi ịdị mfe na nkenke nke onye enyemaka nke Google nyere azịza ajụjụ anyị niile yana nnukwu mgbanwe ọ na-enye maka njikwa nke ngwaọrụ ụlọ. Ndị na-ekwu okwu Google na-enyekwa ezigbo arụmọrụ dị mma, nke anyị nwere ike iji gee egwu dị jụụ ma ọ bụ n'azụ mgbe anyị na-ede ihe, mgbe anyị na-arụ ọrụ ụlọ ma ọ bụ mgbe anyị na-ahazi oriri ọhịa.
Mana kedu egwu gụgharia egwu iji jiri egwu si na ndị okwu smart smart Google? N'ime akwụkwọ ntuziaka a, anyị ga-anwa ịza ajụjụ a na-adọrọ mmasị site n'igosi gị otu esi esi na Google Assistant na-ege egwu egwu n'efu, na-enweghị akwụ ụgwọ ọnwa kwa ọnwa
ỌG REGAD AKW :KWỌ: Otu esi ege egwu na Google, Alexa na Siri (iwu olu)
Egwu efu na Google Assistant
Iji gee egwu egwu na iwu olu, anyị ga-ebu ụzọ jikọọ Nest Mini ma ọ bụ Nest Audio nke Google nyere na netwọk Wi-Fi anyị, wee hazie ọrụ nkwanye ga-eji na ngwa Google Home, enwere n'efu maka gam akporo na maka iPhone / iPad. Ọ bụrụ na anyị ejikọbeghị ọkà okwu Google na netwọkụ anyị, anyị na-akwado ka ị gụọ ntuziaka ahụ Ihe Homelọ Google (akwu) nwere ike ịme: onye enyemaka olu, egwu na akpaaka ụlọ.
Nịm YouTube Music na-ege ntị free music
Site na ndabara, Google Assistant na ndị na-ekwu okwu kwekọrọ ga-eji YouTube Music iji nyefee egwu n'efu - n'eziokwu, egwu YouTube niile dị na anyị zuru oke, yana mgbakwunye mgbasa ozi (nke ga-apụta n'emeghị oge n'oge playback).
Iji jide n'aka na ị rụọla egwu YouTube Music dị ka egwu egwu egwu, mepee ngwa ahụ Ihu ụlọ Google Na ama ma ọ bụ mbadamba anyị, anyị na-edebanye aha na otu akaụntụ Google anyị na-eji ahazi ndị ọkà okwu, pịa akara ngosi nke akaụntụ anyị na aka nri aka nri, pịa Ọkachamara Ntọalaka anyị gaa na kaadị Banyere anyị ma n'ikpeazụ pịa Egwu.
Na ihuenyo nke meghere, gbaa mbọ hụ na akara akara dị n’akụkụ ihe ahụ Egwu Youtube; Ọ bụrụ na ịhọrọghị ya, pịa olu gị iji rụọ ọrụ ya ozugbo. Iji malite a song, playlist ma ọ bụ album anyị ga-ekwu Hey Google na-ekwu okwu n’akụkụ ọkà okwu na-eso aha abụ, omenka ma ọ bụ ndepụta ọkpụkpọ a ga-egwu.
Melite Spotify ige egwu egwu n'efu
Site na nnyemaaka Google anyị nwekwara ike iji ọrụ nke Spotify nyere iji gee egwu egwu na-akwụghị ụgwọ site na okwu Nest; Ọ dịghị mkpa ịnwe ndenye aha nọ n'ọrụ na Spotify Premium, dịka Homelọ Google na-akwado Ọrụ Spotify na-akwụghị ụgwọ (site na ntinye ad na oke na egwu nke enwere ike igbanwe). Iji rụọ ọrụ Spotify na Google Assistant anyị agaghị enwe ike ibudata ngwa raara onwe ya nye, anyị ga-emepe ngwa Google Home na ekwentị anyị, mepee menu n'elu aka nri (akara ngosi akaụntụ) ma weghachite anyị na ụzọ ahụ. Ọkachamara Ntọala -> Ọrụ -> Egwu. Na ihuenyo anyị pịa na mmewere Spotify, anyị pịa olu Akaụntụ onye ọrụ.
Window ga-emeghe ịjụ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịmepụta akaụntụ Spotify ọhụrụ dabere na akaụntụ Google ma ọ bụ banye na akaụntụ Spotify dị ugbu a; na nke ikpeazụ ahụ, windo nbanye ọhụrụ ga-emeghe site na nke anyị nwere ike tinye aha njirimara na paswọọdụ nke akaụntụ Spotify ma ọ bụ jiri otu hotkeys dị n'elu. Ọ bụrụ na anyị nwere ngwa Spotify awụnyere na ama anyị, mgbe ịpịrị Akaụntụ onye ọrụ The Spotify ngwa ga-emeghe ozugbo na anyị nwere ike iji na-ama metụtara akaụntụ aka ọrụ na-na Google nnyemaaka.
N'ọnọdụ abụọ ahụ, a ga-agbakwunye ọrụ Spotify na ndị na-ahọrọ na ihuenyo ahụ Egwu: iji ya mee ihe niile anyị ga - eme bụ itinye akara akara n'akụkụ Spotify ihe (na ngalaba Ọrụ egwu gị). Iji malite ịkpọ egwu naanị kwuo Hey Google na-esote ọkà okwu na-esochi aha abụ ahụ, onye na-ese ihe, egwu egwu ma ọ bụ ụdị a ga-egwu.
Esi egwu redio Italiantali
Na mgbakwunye na ọrụ ndị na-ewu ewu kachasị ewu ewu, ịnwere ike iji Google Nest na-ekwu okwu iji gee nke gị redio kacha amasị, na-eji ọrụ nke TuneIn nyere (agbakwunyere dị ka ọrụ amamihe maka Google Assistant).
N'okwu a, anyị agaghị awụnye ngwa ọ bụla ma ọ bụ jikọta ụdị ọrụ ọ bụla: iji gee redio na nkwanye anyị ga-ekwu Hey Google sochiri Tinye Radio 105 na Tunein; doro anya na anyị nwere ike igwu ọ bụla Italian redio dị na TuneIn nanị site na-agbanwe aha nke iwu olu hụrụ a mgbe gara aga. Iji mara redio niile a na-ebute site na TuneIn, gụọ ozi dị na weebụsaịtị gọọmentị nke redio TuneIn Italian.
Ọ bụrụ na anyị kacha nwee mmasị ige egwu sitere na redio, anyị na-akpọ gị oku ka ị gụọ ntuziaka anyị Otu esi ege ntị free online redio na PC na weebụsaịtị mi Ngwa kachasị mma ige redio FM na iyi egwu na gam akporo na iPhone.
N'iji ọrụ gụgharia YouTube Music, Spotify Free na TuneIn Radio anyị ga-enwe nnwere onwe ime nhọrọ zuru oke gee egwu n’efu n’etinyeghị otu euro na ndenye aha dijitalụ ma na-ezere dabere na piano egwu egwu (na-abaghị uru na nke a). O doro anya na ọrụ ndị ahụ e kwuru na mbụ na-enye egwu egwu egwu n'efu na mgbakwunye nke ụfọdụ njedebe, dị ka ngosipụta nke mgbasa ozi na njedebe na ole egwu anyị nwere ike ịhapụ; Ọ bụrụ na oke ndị a dị ka nke ekwe ekwe ma anyị chọrọ inwe nnwere onwe zuru oke ige ntị, anyị na-akpọ gị ka ị gụọ ntuziaka anyị Uru nke Spotify Premium iji gee ma budata egwu na-enweghị oke mi Egwu naanị na weebụsaịtị Youtube Music na ngwa sitere na PC na ama.
Anyị nwere ndị ọkà okwu nwere ọgụgụ isi na Amazon Alexa? Ọzọkwa n'okwu a, anyị nwere ike ịge egwu na-egwu egwu n'efu, na-eji ọrụ egosipụtara na ndu anyị. Etu esi ege egwu egwu efu na Alexa, site na ngwa ma ọ bụ nkuzi.
Otu esi zoo mkparịta ụka WhatsApp